18.03 Sao variana
Ny teny hovakiantsika anio Alahady 18 Marsa 2018 ka hakantsika ny sakafom-panahy dia izay voasoratra ao amin' ny Apokalypsy 2.1-7, ka hojerentsika amin' izany ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ? sy ny hoe inona no fampitandremana hita ao ?
1 Soraty ho amin’ ny anjelin’ ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain’ Ilay mihazona ny kintana fito eny an-tànany ankavanana sady mandeha eo afovoan’ ny fanaovan-jiro volamena fito :
2 Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsi-fahazakanao izay mpanao ratsy; ary hianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenany ho Apostoly, kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy;
3 ary manana faharetana hianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka.
4 Kanefa manan-teny aminao Aho, satria efa niala tamin’ ny fitiavanao voalohany hianao.
5 Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaha, ka manaova ny asa voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin’ ny fitoerany, raha tsy mibebaka hianao.
6 Kanefa izao no toetranao: halanao ny asan’ ny Nikolaita, izay halako koa.
7 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ ny Fanahy amin’ ny fiangonana. Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin’ ny hazon’ aina, izay eo amin’ ny Paradisan’ Andriamanitra.
Milaza ny tsara (1-3).
Mahafinaritra fa ny Tompo dia tsy mijery ny faharatsiantsika fotsiny.
Eto dia nolazainy sy nambarany ny hatsarana sy ny herin’ny Fiangonana tao Efesosy.
Lesona lehibe ho antsika izany satria matetika ny olona dia tsy mahita afa-tsy ny lafy ratsin’ny hafa fotsiny ka lasa adino fa manana ny maha-izy azy avokoa ny olona tsirairay, ny Fiangonana tsirairay, ny fikambanana kristiana tsirairay.
Maro ny toetra tsara nananan’ny Fiangonana tany Efesosy toy ny fikelezana aina sy faharetana, tsy fitiavana ny ratsy (3).
Tandremo anefa (4-7).
Ny Tompo anefa tsy nijanona teo amin’ny fanambarana ny tsara nataon’ny Fiangonana tany Efesosy.
Raha nijanona teo fotsiny ny Tompo dia mety ho namita-tena ihany izy ireo ka tsy mahita izay tokony hahitsy.
Tamin’izany fotoana izany mantsy dia niroborobo ny fiparitahan’ny fiangonana tamin’izany toerana izany. Hany ka lasa variana tamin’ny asa mahazatra fotsiny.
Toy ny misy ankehitriny dia toa lasa fahazarana fotsiny ny mankany am-piangonana ka lasa adino ilay tena fitiavana an’Andriamanitra sy ny asa nanirahan’ny Tompo.
Noho izany dia nampitandrina azy ireo ny Tompo eto sao dia adino ilay “fitiavana voalohany”. Sao dia ho variana amin’ny fombafombam-pivavahana fotsiny ka hadino ilay tamin’ny fotoana voalohany nanolora-tena ho an’ny Tompo ka tena nampahafana ny fiarahana taminy.
Aoka hampahatsiahivina fa ny andraikitra voalohan’ny fiangonana dia ny fitoriana ny Filazan-tsara.
Raha tsy ao izany, na dia be asa aza ny fiangonana, dia toa zava-poana ihany.
Manao ahoana ny asan’ny fiangonana misy ahy ?
Inona no andraikitro manoloana izany ?